By ဝေယံအောင် 24 October 2017
၁။ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်များစွာပါဝင်မည့် Radio Festival 2017 ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို မင်းဓမ္မလမ်းရှိ Myanmar Event Park တွင် ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်ပြီး ပွဲလက်မှတ်များကို 4TV Showroom များတွင် မှတ်ပုံတင်နှင့်တကွ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
၂။ နာမည်ကျော်အဆိုတော်များပါဝင်မည့် Myanmar Colour Festival ကို ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ၂၉.၁၀. ၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေး ၈ ထောင်ကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဆေးရောင်မှုန့် အထုပ် ၂၀၀ ကို အခမဲ့ မဲဖောက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
၃။ SAI Cosmetix ထုတ်လုပ်ခြင်း ၁ နှစ်ပြည့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နှင့် ပရိတ်သတ်များတွေ့ဆုံပွဲကို Junction Square တွင် ၂၉.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ထုတ်ကုန်သစ်များကို မိတ် ဆက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နှင့်ပရိတ်သတ်များ သီချင်း အတူသီဆိုခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းများ ပါဝင်မည် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
၄။ တေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်၏ တတိယမြောက် တကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ်မိတ်ဆက်ပွဲကို Hleden Centre တွင် ၂၉. ၁၀. ၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မိတ်ဆက်ပွဲတွင် နီနီခင်ဇော်မှ တေးသီချင်းအသစ် များကို ဖျော်ဖြေပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်တရ အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၅။ အောင်မြင်ပျော်ရွှင် လုပ်ငန်းခွင်ဆီသို့ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲကြီးကို Rose Garden Hotel တွင် ၂၉.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြပွဲကြီးတွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၀ ကျော် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး သိရှိလိုသည် များကို ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၃၁၃၄၉၈၃၄ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင် ကြောင်းသိရသည်။
၆။ ပန်းချီကြည်ဝင်း (ရန်ကင်း)၏ မြန်မာ့အလှပန်းချီပြပွဲကို လောကနတ်ပန်းချီပြခန်းတွင် ၂၁.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် မြန်မာမှုပန်းချီကားများနှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသ အလှအပပန်းချီကားများ ကို ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၇။ လူကြိုက်များလှသည့် ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံ ယုကတကို ဝတ်ဆင်ပေးမည့်အစီအစဉ်ကို ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ပုလဲကွန်ဒိုရှိ Japan Culture House တွင် ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့မနက် ၁၁ တွင် တကြိမ်၊ နေ့လယ်၂ နာရီတွင် တကြိမ် ပြုလုပ်သွား မည် ဖြစ်သည်။ ယုကတ ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပွဲတွင် ပါဝင်လိုသူများသည် Japan Culture House ၏ message box တွင် စာရင်းပေး နိုင်ပြီး စုစုပေါင်း ၂၀ဦးကို ဝတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၈။ ၂၂ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာရဲတီးဝိုင်း (World Police Band Concert) ဖျော်ဖြေပွဲကို ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကမ်းနား လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းတို့တွင် ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ နံနက်ပိုင်းအချိန်များတွင် ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့ တီးဝိုင်းအပြင် ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့တီးဝိုင်းတို့မှလည်း ချီတက်ဖျော်ဖြေ ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၉။ မြန်မာပန်းချီဆရာကြီးများ၏ လက်ရာများကိုပြသမည့် Moon Light ပန်းချီပြပွဲကို ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၃၅ လမ်း (အလယ်ဘလောက်)ရှိ Moon Art Gallery တွင် ၂၁.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် ပန်းချီဆရာကြီးဦးငွေကိုင်၊ ဦးဘကြည်၊ ဦးစန်းလွင်၊ ဦးကိုလေး၊ ဦစိန်၊ ပေါ်ဦးသက်၊ ဗဂျီအောင်စိုး၊ ပန်းချီ ခင်မောင် ရင်၊ ပန်းချီဦးသောင်းဟန်၊ ပန်းချီဝသုန်၊ ပန်းချီမောင်မောင်သိုက်တို့၏ပန်းချီကားများကို ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
၁၀။ ပန်းချီဦးလွန်းကြွယ်မိသားစု၏ The 5th Grand Art Stream 2017 (Lun Family Art Exihibition) ပန်းချီပြပွဲ ကို ပြည်သူ့ဥယျာဉ်ရှိ Yangon Gallery တွင် ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲ တွင် လွန်းမိသားစု၏လက်ရာစုံပန်းချီကား ၁၀၀ ကျော်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။